Inona avy ireo fomba voaporofo fa miverina haingana?
Mbola mino ve ianao fa ny hany fomba hahazoana raki-peo fifadian-kanina dia ny mamorona votoaty lehibe ary miandry ny fifandraisana amin'ny mpampiasa anao? Raha eny, dia hanokatra ny masonao amin'ny fahamarinana ity lahatsoratra ity. Mazava ho azy, ny famoronana votoaty tsara dia manan-danja amin'ny fampielezan-tsindrim-peo fikarohana, saingy mety haka volana na taona maro hisarihana ny mpamaky amin'ny votoatiny.
Hodinihinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba hanamafisana ny dingan'ny famerenana rindran-damba ho an'ny tranokalanao ary hanatsara ny fanentanana ny marika eo amin'ny pejy finday.
Fomba handraisana backlinks fast
Fanontaniana momba ny Quora
Quora dia sehatra iray miavaka ny olona dia mitady valiny mety amin'ny fanontaniany. Toeram-piantsonana feno olona, ​​fara-fahakeliny olona an'arivony isan'andro no mametraka fanontaniana. Hadalana ny tsy firaharahiana io fotoana io hampitombo ny fanentanana ataonao momba ny fandraharahana ary hahasarika mpividy vaovao amin'ny tranokalanao. Ny zavatra tokony hataonao dia ny mikaroka ny tenimiafina misy ifandraisany amin'ny niche. Ho vokatr'izany dia hahita fanontaniana an'arivony ianao izay miandry ny valinteninao. Mila mamaly ireo olana izay manam-pahaizana ianao, ary raha misy lahatsoratra bilaogy manokana na lahatsoratra ao amin'ny sehatra misy anao izay mety ho valinteny ilaina amin'ny fanontaniana, dia asio rohy io. Na izany aza, mila maka antoka ianao fa tsy rohy amin'ny tranonkalanao fotsiny mba hahazoana rohy. Raha te hividy Quora ianao, dia azo inoana fa hiteraka sazy amin'ity sehatra ity izany, ary hesorina amin'ny rafitra ianao.
Manampy mpamoaka mpanao gazety
Misy loharano mahasoa ho an'ny mpanoratra, bilaogera ary mpanao gazety antsoina hoe HARO. Ny iray amin'ireo olona voakasik'izany dia afaka mametraka fanontaniana any, ary raha manana valiny amin'ny fanontaniana miorina amin'ny fikarohana ianao, dia afaka mahazo fanaovan-gazety maimaimpoana. Ny lahatsoratrao dia afaka miseho amin'ny tranokalam-baovao miaraka amin'ny mpihaino marobe na mahazo milina maimaim-poana. Azonao atao ihany koa ny mamoaka ireo loharanom-baovao maoderina toy ny New York Times, Entrepreneur, ary ny hafa, izay mahatonga an'i HARO ho toerana mahafinaritra hanangona backlinks avo lenta. Raha ny marina dia tsy hahazo rohy maro avy amin'ity loharano ity ianao. Na izany aza, ireo izay azonao ho azonao dia afaka mitondra lanjany sy fahatokiana be dia be anao.
Mitady rohy tapaka
Ny tranokalan'ny rohy dia mety ho tonga lafatra ahafahana miverina haingana. Na izany aza, mety ho sarotra izany raha mifantoka amin'ny karazana rohy tapaka ianao. Maro ireo tranonkala izay nandrava rohy, saingy lavitra ny azy rehetra dia te-hanamboatra ny rohy tapaka ary mametraka anao fa tsy ireo kapoka. Mba hahazoana valim-bavaka tsara dia mila mampitombo ny fikarohana ianao. Mila mitady ny loharanon-tranonkala ianao amin'ny rohy tapaka ao amin'ny tsenanao. Raha ny fitsipika, ireo mpampiasa tranonkala dia mety hanamboatra rohy tapaka ao amin'ny tranonkalany ary lahatsoratra bilaogy amin'ny ankapobeny. Raha manao izany izy ireo dia miteraka fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny sehatra misy azy ireo ary manatsara ny tranokalan'ny SEO Source .